ကျမနဲ့ဗာလင်တိုင်းဒေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » ကျမနဲ့ဗာလင်တိုင်းဒေး
Posted by Novy on Feb 15, 2013 in Short Story | 50 comments
မနေ့က ဗာလင်တိုင်းဒေးရောက်တော့ ဒါလင်နဲ့ အလွမ်းသည်ပြီးတဲ့နောက်
စိတ်အာရုံတွေက လွန်ခဲ့တဲ့ ၆နှစ်က ဗာလင်တိုင်းဒေလေးကို သတိယလွင့်မျောသွားလေးရဲ့
ဒီနေ့ဖေဖေါ်ရီ 14ရက်ပဲ ဒါလင့်ကိုသတိရလိုက်တာ
ဒီညနေရုံးဆင်းရင် အင်တာနက်ဆိုင်ကနေဖုံးခေါ်လိုက်အုံးမယ် ကိုယ့်ဖုံးနဲ့ခေါ်ရင် ပိုက်ဆံပိုကုန်တယ်လေ
ရုံးဆင်းတော့တက္ကစီလေးစီးပြီး ပါ၇မီလမ်းဆုံနားက အင်တာနက်ဆိုင်ကလေးကို ၀င်ခဲ့တယ်ပေါ့
ဆိုင်ထဲရောက်တော့ လူငယ်လေးတွေတော်တော်များများအပြုံးတွေများစွာနဲ့ ကြူနေကျတယ်ပေါ့
ကိုယ်လဲ လွတ်တဲ့ခုံးလေးမှာဝင်ထိုင်ပြီးဆိုင်ကကောင်လေးကို ဖုံးခေါ်ခိုင်းရတာပေါ့
တွေ့ပါပြီဒါလင်နဲ့ ရင်တွေတောင်ခုန်နေတယ် ဘာစပြောရမှန်းတောင်မသိဘူး
ဘေးနားက ကလေးတွေက ကိုယ့်ကို မသိမသာလှမ်းကြည့်နေကျတယ်
အိမ်ရောက်တော့မကျေပွဲထက်နွဲတာပေါ့ ပိုက်ဆံကုန်ရင် ကုန်ပစေဆိုပြီ
” ဒီလောက်တောင်မသိဘူးလား ကဗျာမဆန်လိုက်တာ
အရမ်းစိတ်တိုတယ် နောက်ဘယ်တော့မှ ဖုံးစမဆက်ဘူး”
” ကိုကြီးအလုပ်တွေများပြီး ဘာနေဆိုတာတောင် သတိမထားလိုက်မိဘူး
တစ်ရက်မြန်မြန်ကုန်ပြီး “မ ” နဲ့မြန်မြန်ပြန်တွေ့ချင်တာပဲခေါင်းထဲမှာရှိတယ်
ကျန်တာတွေကို ခေါင်းထဲမှာ မရှိလို့ ခွင့်လွတ်နော် ”
နောက်တပတ်လောက်ကျတော့ လူကြုံနဲ့ ကျမကြိုက်တဲ့ရေမွှေးနဲ့ချောကလက်လူကြုံထဲ့ပေးလိုက်တယ်လေ
သြော်… ရိုမတ်တစ်မဆန်တဲ့ ဗာလင်တိုင်းဒေတွေကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရသလို
ဦးကြောင်ကို ထားခဲ့ပီး တိုဂျီးဆိုဒါဂျီးနောက် ပါသွားတဲ့ နိုဗွီဂလေး အဂုဒေါ့ တယောက်ထဲ အထီးကျန်နေရပီ မဟုတ်လား…။ သနားဘူးကွ…
အူးကြောင်မှ မီးမီးကို မသနားရင်ေ၇မရှိတဲ့ချောင်းမှာ နှခေါင်းဖေါ်ပြီး
ကျုပ်တို့ တုန်းကတော့ “ချစ်သူများနေ့” တွေဘာတွေမရှိသေးပါဘူး
မသကာ သူငယ်ပြန်၇ကောင်းလားလို့ မဟေသီရဲ့
သူရို့တွေ အိုက်လို ကဗျာမဆန်တတ်တာတွေခက်ထှာ…
ဘယ်လယ်တိုင်းချောကလက် ၀ယ်ပေးမဲ့အစား.. တခြား အသုံးဝင်တာ ပူဇာပါလားဒဲ့… :buu:
ချောကလက်စား အားသိပ်ရှိသဗျ…. သိလဲသိဘဲနဲ့…. ဟိုကအထှာနဲ့ အထှာနဲ့….။
အောင်ကြူးကတော့ ချက်ဆို ဗိုက်ပြေးကပ်ပြီး သန်ရာ သန်ရာတွေးတော့ သဂိုး
အဲလိုပြောရင်တော့ ဘရန်းတက်တွေကိုသာ ပူစာပလိုက်
ကျန်သွားလို့… ရင်ခုန်ခြင်ရင် သိပ်စဉ်းစားမနေနဲ့…. ဘာလုပ်ရလဲသိလား…
ဟီ ဟိ အူယားလိုက်တာ
ဘာတဲ့ “ကိုဂျီး” တဲ့… “မ” တဲ့…
အင်း… မိန်းမတွေများ ယောက်ျားမာယာနဲ့တွေ့တော့ ပျော့သွားတာပဲ…
ဗာလင်တိုင်းကို အမြင်ကပ်လို့ မေ့ချင်ယောင်ဆောင်ကြပါသတဲ့…
သူမှာ ခေါ်စရာ “မ” မရှိတိုင်း မနာလိုဖစ်နေတယ်
ဟိုဘက်က အူး၎အမ်ကယ်သဂျီး ပို့စ်မှာတော့ ဒီလိုလေး ရေးထားတာ သွားတွေ့ရဲ့ …..
…… (credit to Kai’s post )
အသက်ကြီးသူစာရင်းထဲမှာ သင် မပါနိုင်သေးဖူးဆိုတာ သေချာလိုက်စမ်းပါ။ သင့်မှာ လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေ အများကြီး ရှိနေသေးတာ။ မေ့မထားပါနဲ့လေ။ အသက်ကြီးပြီလို့ ပြောတတ်ကြတဲ့ ကိုယ့်အောက်ငယ်ရွယ်သူတွေကို တွေ့ရတဲ့အခါတိုင်း ကိုယ်ပြောချင်ခဲ့တဲ့ ဒီစကားလေးကို ဒီနေရာမှာ ပြော လိုက်တာ။ အသက်ကြီးသူဆိုတာ သင့်ထက် အသက်လေးဆယ် ပိုကြီးသူကိုသာခေါ်တာ။ မှတ်ထားလိုက်ပါ။
ဆိုတော့ကာ … အားမလျော့နဲ့ဦးဗျ
ဟိုသီချင်းစာသားလေးလို ……… ” အားတင်းထားပါဦး …. အားတင်းထားပါဦး”
ကျနော်တို့ကတော့ ဒီသံသရာ ၀ဲဂယက်ထဲမှာ မမြဲတဲ့သဘောတွေကြား ပူလောင်စွာ ဖက်တွယ်နေရမဲ့အတူ အူးကျောက်လမ်းစဉ်ဘဲ လိုက်သွားပါဘီ …. ကွီ..ကွီ
ဗယ်လင်တိုင်းဒေး ဆိုတော့ နဲနဲ့ ၀င်နွဲလိုက်ဦးမယ် ဒို့လည်း ကောင်မလေးတစ်ယောက် ချောကလတ် တွေသွားပေးပါတယ် ရုံးဖွင့်ရက် သူ့ရုံးပေါ်ထိသွားပေးလိုက်တယ်… သူမျက်နှာက မကြည်မသာနဲ့ လာပေးတဲ့သူကို …ပေးလိုက်ရတဲ့ကောင် ဟတ်ကော့ကြီးဖြစ်လေရော။ ဗယ်လင်တိုင်း ဟတ်ကော့ပေါ့ဗျာ…
ပြန်ချော့တတ်တဲ့ ဒါလင်ကြီးက အများ၊ အများကြီး တော်သေးသလားပဲ။
ဖတ်ရင်းနဲ.ကို ဒီလူကြီး ဒီလောက်တောင် မေ့ရလားလို. စိတ်တောင်ရောတိုသွားတယ်…
အမှတ်တရ ဗာလင်တိုင်းဒေး တွေကို
ချစ်တတ်တဲ့သူတွေရဲ့ ရင်ခုန်သံဟာ အချိန်ကြာတော့ အသံမကြားသလိုမို့ ပျောက်သွားတယ်လို့ ဆိုချင်ကြတယ်။
တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး အချိန်ကြာတဲ့အခါ ရင်ကျက်တည်ငြိမ်မှု့အရ နူးညံလွန်းလို့ တိုးတိုးညင်သာစွာ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့လေး ခုန်နေလို့ပါလို့…………….။
မနိုဗွီခံစားရေးတာမို့ အနော်လည်း စိတ်ကူးခံစား ရေးတာပါ။
မော့ပါဆွန့် ရေးတဲ့ ဝတ္တုတစ်ပုဒ် ကို မောင်ထင် ဘာသာပြန်ထားတာ ရှိတယ်ဗျ
တရားသူကြီး နဲ့ အဖိုးကြီးအို အဖွားကြီးအို လင်မယား၂ယောက် တရားရုံးမှာ စကားပြောကြတာတွေကို ရေးထားတာပါ
မမနို နဲ့ တိုက်ဆိုင်မှု ရှိမယ် ထင်လို့ ၊ ရှာဖတ်ကြည့်ပါလို့ 
နောက်ဆုံးတော့လည်း ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက်နဲ့ကိုပဲ ပျော်ရွှင်သွားရတယ် မဟုတ်လား။ :hee:
ယောက်ျားမာယာ မန်ကျည်းကိုးပင်ထဲမှာ မနိုကို ဆွဲခေါ်သွားတာ
တစ်ခွန်းထဲ ပြောလိုက်တာနဲ့ ချက်ခြင်း စိတ်ပြေသွားတယ်မလား
အိုးးးး အသင်မာဃ မှတ်လော့
အော် ကြင်ဖော်မက်တဲ့ ဇင်ယော်ငှက်လေးတွေပေါ့ကွယ်
အရေးထဲဗျာ ဂန်းမရေ လဒငှက်ဟဲ့လဒငှက်
သူများရေးထားတာ ဖတ်ဖူးတာလေး ပြန်ေ၇းပြတာပါ။
လေးပေါက်က အခုတော့ မဒမ်ပေါက်ကို အခုလိုပြောနေပြီပေါ့
အဲ ဆရာအုပ်ကို မိတ်ဆက်ပွဲမှာ မနိုက အိမ်ကဒါလင်ကြီးလို့ ပြောတာပါ၊အိမ်က ဟာကြီး မဟုတ်ပါဘူးလို့ ရှေ့နေလိုက်ပေးမလို့ comment off နေတော့ အခွင့်မရလိုက်ဘူး။
နောက်တစ်ခါ ကံစမ်းမဲကျရင် ဆုကြီးကြီးပေါက်အောင် လုပ်ပေးနော်။
နိုင်ငံခြားနေသူက.. ဗာလင်တိုင်းဒေး… မသိနေ(သတိမထားမိနေ) တာပဲ.. ကံကောင်းစိတ်ချရတယ်မှတ်ပါကွယ်..
အဲဒါ.. အကောင်းဆုံးဗာလင်တိုင်းဒေး လက်ဆောင်ပါ.. :harr:
အကောင်းဆုံးဗာလင်တိုင်းဒေး လက်ဆောင်ကို မနိုရမှန်းသိတော့တယ် ဟီးးးး
” ဦးကျောက် သူငယ်ချင်း အိမ်ထောင်သည်များကတော့…
ဗာလင်တိုင်းကို အမြင်ကပ်လို့ မေ့ချင်ယောင်ဆောင်ကြပါသတဲ့ ”
မဟုတ်သေးပါဘူး ၊ ဗာလင်တိုင်း မှာ ၊
မိန်းမကရော ယောက်ျားကို လက်ဆောင် မပေးရတော့ဘူးလား ။
လောကကြီးက မတရားပါဘူး ။
ဘယ့်နှယ် တစ်ခုခုဆိုရင် ၊ ယောက်ျားလေးကပဲ ပေးနေရတယ် ။
ရည်းစား စကားလဲ ယောက်ျားကပဲ စ ပြောရမယ် ။
ယောက်ျားကပဲ မိသားစုကို အဓိက ရှာဖွေ ကျွေးမွေးရမယ် ။
မဟုတ်သေးပါဘူး ၊ လောကကြီးက မတရားပါဘူး ။
ယောက်ျားတွေ ကိုယ်နှိုက်ကလဲ နေမှ မနေတတ်ကြတာ ၊
ကိုယ်က ရှာဖွေ ကျွေးမွေးရမယ့် လူ ပဲ ၊ ခပ်မာမာ နေစမ်းပါ ။
ကိုယ်တွေ ယောက်ျားလေးတွေကသာ တကယ်ညီရင် ၊
သူတို့ မိန်းကလေးတွေ ရည်းစားစကား လာပြောလိမ့်မယ် ။
မောင်ကျောက်ကို သင်္ကန်းစည်း ဘုန်းကြီးဝတ်ရအောင်လို့…
အချွန်နဲ့ မ ပြန်ပြီ…
အဘလို ဖြူဖြူချောချော ကပ္ပတိန်ကြီးမဟုတ်ဘူး အဘရဲ့…
အဘဖေါ်ကို ဒီတစ်ခါတွေ့မှ ပြောအုံးမယ်
( ရည်းစားစားမဟုတ်ပါ) :harr:
သြော် အဘ အဘ အဲဒိတော့ ကြိုက်ရာရွေးခွင့်ပိတ်သွားတာပေါ့ မဟာ အခွင့်အရေးကြီးရထားကိုများ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့သူကိုယ်ပြောခွင့်ရထားတာများ နာတယ်ထင်နေသေးလား အဘရယ် :harr: လက်ဆောင်ကိစ္စကတော့မှန်ပါတယ် ဘယ်သူစပေးပေးပေါ့နော။
မနိုရေ ဖတ်ရင်းနဲ့ရီမောရသလို မနိုနဲ့အတူကြည်နူးခံစားသွားပါတယ် အားတော့မကျတော့ပါဘူးရယ်
၁၄ရက်နေ့က မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး.. အပြင်မှာ လင်မယား ၂ယောက် ညစာ သွားစားတာ ဆိုင်က အပြန် လက်ဆောင် ဆိုပြီး အထုတ် တထုပ် လက်ဆောင် ပေးလိုက်တယ်။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လက်ဆောင် ရတာတော့ ပျော်တာပေါ့။ (အလကားရတာပဲ)
တသက်နဲ့ တကိုး.. ဗာလင်တိုင်းဒေးမှာ ရတဲ့ လက်ဆောင်ပဲ..
သကြားလုံး ကတော့ ဆူး လည်း သိပ်စားလေ့ မရှိဘူး။
ဘာရယ် မဟုတ်ဘူး မှတ်မှတ်ရရ လက်ဆောင်ရတဲ့ သကြားလုံးလေးတွေမို့.. ပန်းကန်ထဲ ထည့်ပြီး ဘုရားဆွမ်းတော်ကပ်ခဲ့တယ်။
နောက်နေ့ အိမ်နားက ကလေးတွေ ကိုယ့်လိုပဲ ပျော်သွားအောင် သကြားလုံး ပေးလိုက်မယ် စိတ်ကူးထားတယ်။
လိမ္မာတဲ့ဆူးကလည်း ၂ယောက်ကုသိုလ်ရအောင် သကြားလုံးလေးတွေ
ဟီး ဟီး မနိုရေ
ဒါလင်ကို တ တဲ့ “ဒါလင်တဒေး” ဆိုရင် ပိုမှန်မလားလို့… ဟီ ဟိ
ဦးကျောက်က သူ့မှာ တစရာဒါလင်မရှိလို့
ဗာလင်တိုင်းဒေး ရောက်တိုင်း ဂုံနီအိတ်ဆောင်၇တယ်ဆိုလား
ရင်တွေ ခုန်ချင်နေပီ ..
ညန်ညန် ကြီးပျင်းလာဖို့ ကြိတ်ကြိတ် ဆုဒွေတောင်းနေဒါ …
သူဂလေး ကြီးလာဒေါ့မှ ရင်ဒွေ လွတ်ခုန်ပလိုက်မယ် …
နောက်ဒါဘာ ဂျီးဒေါ်ရေ …
မကျေနပ်ရင်လည်း ခုထဲက စာရင်းသာ တို့ထားလိုက်ဂျာ …
နောက်တခါတွေ့ရင် ရှောင်ရမဲ့ စာရင်းထဲ့ကို
ဒီလောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးကို ရထားတဲ့ ကိုကြီး ရင်ထဲမှာ မနို အတွက် နေ့တိုင်း ဗာလင်တိုင်းနေ့ ကျင်းပနေတော့ ထူးခြားပြီး လွမ်းပြနေစရာ မလိုလို့ ပါ။
ထပ်ပြီး ဟောက်ခံရရင် အရီး ကိုလွဲချလိုက်။
ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ပြောရရင် ကျားကြီးလုပ်ပြီး ချွဲပြနေတဲ့ သူထက် ကိုယ့်အတွက်လက်တွေ့ စဉ်းစား လုပ်ကိုင်ပြသူက ပိုပြီး တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
တကယ်တော့ အဲ့လိုရိုမန့်မဆန်တဲ့ ယောက်ျားတွေကပဲ ခပ်ကောင်းကောင်း ပြောရမလားပဲ..
မြင်ဖူးတယ်.. အရမ်းကို နူးညံ့ပြီး ရိုမန့်ဆန်တဲ့သူတွေကလေ တကယ်တမ်းကျတော့ .. ဘယ်လိုပြောရမလဲ… စိတ်ဓာတ်ပျော့ညံ့ကြသလိုပဲ…
ဒါလင်နဲ့ “မ” နဲ့ ဂျူနိုလေးနဲ့အတူ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဗာလင်တိုင်းနိုင်ကြပါစေလို့..
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည်ဝအောင် မိသားစုလေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားပါမယ်လို့